China Kutengesa Huni Door Kugadzira Machine Atc 3 Axis Woodworking Machinery 1325 CNC Router Manufacturer and Supplier |Apex
Kupisa Kutengesa Huni Door Kugadzira Machine Atc 3 Axis Woodworking Machinery 1325 CNC Router
*Mhepo ina yakatonhodzwa spindle (HQD kana Italy HSD spindle sarudzo), yemhando yepamusoro uye 24h inoramba ichishanda.
*HIWIN sikweya njanji, kuvharika kwakanaka uye kuomarara, hapana kukanganisa kwekushandisa kwenguva refu.
*Kumhanyisa giya rack kutapurirana kweXY axis, uye yakakwira chaiyo bhora screw transmission yeZ axis,
kuve nechokwadi chekumhanya kukuru uye kurongeka kwakanyanya panguva imwe chete.
*Pneumatic ATC ye 3 spindles ine maturusi akasiyana.Automatic tool inoshandura inochengetedza nguva yekuchinja maturusi nemaoko.
* Vacuum tafura ine vacuum pombi, inogona kukurumidza uye yakagadzikana kugadzirisa zvinhu patafura yekunyora, kuchengetedza nguva uye hupenyu hurefu hwebasa.
*Kudzora sisitimu: Isu tinoshandisa yepamusoro Dsp, Nc-studio control system, Syntec kubva kuTaiwan kana OSAI kubva kuEurop.
Nzvimbo yekushanda 2500* 1300mm / 3000* 1500mm / 3000 *2000mm / 4000* 2000mm
Kudzora system Ncstudio control, sarudzo NK280, SYNTEC
Motokari nevatyairi Nhanho mota / Servo mota
Nhungamidzo njanji Taiwan HIWIN square guide njanji
Transmission nzira High precision rack gear
Tafura chimiro Vacuum uye T-slot tafura
Kushanda kumhanya 8-15m/ min
Tafura Mamiriro Welded Steel Frame
Spindle Power 3.5kw / 4.5kw/ 5.5kw/ 9kw mhepo inotonhodza spindle
Kutonhodza System Mhepo yemagetsi Yakatonhodzwa
#Pneumatic 3 misoro Mhepo inotonhorera spindle:
3.5kw / 4.5kw/ 5.5kw mhepo inotonhodza spindle
PMI/THK inotungamira njanji yechaiyo machining pakumhanya kukuru.Kushanda kwekuchengetedza simba uye hupenyu hurefu hwebasa.
#Yaskawa servo mota nevatyairi:
Isu tinotora Japan YASKAWA Servo mota, yakakurumbira pasi rose servo mota brand nekurongeka kwayo, kutsetseka kumhanya, hapana kuzunguzika mukumhanya kwakaderera, hapana kudonha zvakanyanya kunyangwe mukumhanya kwakanyanya, simba remutoro, kuita kwakavimbika kwekutonga, nezvimwe.
High-kumhanya, yakarurama CNC machining.Tarisa-kumberi ne256 pre-yakaverengerwa zvidhinha ukuwo feedforward control inovandudza kutevedza uye kurongeka chaiko.Tonga magazini yematurusi, hupenyu hwematurusi nezvimwe.
WMH Herion helical rack uye pinion dhiraivha inopa kwakaringana uye ine simba kukurumidza.
Dhizaini yavo yakasimba inovimbisa hupenyu hurefu hwesevhisi nekugadzirisa kushoma.Kugona kunyatsofambisa mitoro inorema.
Mhanya wakanyarara uye wakatonhorera.Iyo 100% mafuta-ashoma dhizaini uye refu vane hupenyu hunovimbisa kushoma kugadzirisa.
(1) Indasitiri yehuni:
Engraving muchina unogona kushandiswa kuveza huni kuveza, huni zvishongo mabhokisi, zvigadzirwa zvekushongedza uye zvishongo zvakavezwa uye zvichingodaro.
(2) Indasitiri yekushambadzira:
Engraving muchina unogona kushandiswa kuveza akasiyana ezviratidzo, marogo, mabheji, mapaneru, hunyanzvi nekushongedza, kushongedzwa kwemba.
(3) Mamwe maindasitiri:
Zvakare inogona kushandiswa kumifananidzo, nzvimbo, calligraphy, zvisimbiso uye humwe hunyanzvi hwemifananidzo uye zvidhori zvemifananidzo uye kumwe kugadzira.
Isu taizogara tiri pano kuti tikupe chero ruzivo rwaunoda panguva yekutanga, uye nekupa mazano ehunyanzvi zvinoenderana nezvinodiwa zvako zvemahara;
Taizobata nezvese zvekugadzira uye zvekutumira zvinhu, mushure mekunge zvese zvagadzirira, taikuudza zvese zvinofamba zvakanaka pano;
3. Mushure mekutengeswa:
Taizopa Shona Version kushanda bhuku.
4.Kana uine chero mibvunzo panguva yekushandisa nekuchengetedza, mainjiniya edu anogona kutaura chirungu chakanaka anokupindura pamhepo kana nekufona.
5.Machine garandi makore maviri.Saka kana muchina wako uine chero kukuvara kusingatarisirwi, tinopa zvikamu zvemahara.
Kana muchina wako uine matambudziko makuru kana chero mukana, mainjiniya edu aizosvika ipapo kuti agadzirise uye agadzirise.
Chii chatinofanira kuteerera pakuisa huni cnc router?
Mushure mehuni cnc router inotengwa, ndezvemusikirwo kuisa uye kugadzirisa.Kunyangwe kana mugadziri achipa masevhisi akadaro, isu tinofanirwa kuigadzirisa tega.Naizvozvo, tinofanira kudzidza nzira yekuisa iyohuni cnc router nemazvo.Saka, izvo zvakakosha zvinofanirwa kutariswa kana uchiisa a huni cnc router?
1. Usaisa iyohuni cnc router panguva yemheni kana mabhanan'ana, uye usaise socket yemagetsi munzvimbo ine nyoro, uye usabata tambo yemagetsi isina kuvharwa, kana zvisina kudaro njodzi dzemagetsi dzinoitika nyore nyore.
2. Mugadziri wehuni cnc router inofanirwa kuve nekunzwisisa kwakadzama kweiyocnc router muchina, uye kugona kushanda nekuishandisa zvinoenderana nezvakatsanangurwa kudzikisa mukana wetsaona.
3. Iyo magetsi emagetsi emagetsihuni cnc router inodiwa kuve 210V-230V.Kana magetsi emagetsi asina kugadzikana kana paine akakwira-simba magetsi akatenderedza, iwo anodzorwa magetsi emagetsi anofanirwa kuiswa pasi pekutungamirwa nenyanzvi.
4. Deko rehuni cnc router yakagadzirwa nesimbi, saka tambo yepasi inofanira kubatanidzwa kuti ive nechokwadi chekuchengetedzwa kwekugadzirwa.Iyo plug-in tambo inofanirwa kushandiswa kana simba radzimwa, uye kushanda kwepamoyo kunorambidzwa zvachose.
5. Chikamu chechimiro cheCNCrouter inotora aviation aluminium castings, iyo yakapfava uye yakapfava, saka usashandise simba rakawandisa paunenge uchiisa screws kudzivirira kutsvedza.
Zvakapfuura: Muunganidzi weguruva
Zvinotevera: 3 Axis CNC Router Wood Carving Machine yeMDF Kitchen Cabinet Furniture
Fekitari inopa zvakananga 4 Axis Otomatiki Chishandiso C...
CNC Router 3 Axis EPS Furo Kucheka Machine Sink...
Kutengeswa paMutengo Unodhura 2030 Misoro mitanhatu 3D Mota...
APEX CNC Router Multi-misoro 3D ine 12 Spindles...